Stylish Gadget entry level - lena LG Leon. Uphenyo kule divayisi, hardware ne-software yayo Ukucaciswa - okungukuthi isihloko lesi sihloko. Nokho, ngokusekelwe izimfanelo zayo kanye nobuthakathaka uzonikezwa nomhlahlandlela yokufuna yayo.
Ubani le gajethi?
Inani, hardware ukugxusha nesofthiwe ingxenye yale foni zibonisa ngokucacile ukuthi kungokwalabo ikhambi entry level, noma njengoba bebizwa kanjalo, isigaba isabelomali. Ezinye omisiwe, isibonelo, ngesimo isibonisi lwalugobile akanayo. Kodwa kukhona isethi ephelele ethandwa kakhulu izici usuku. Umklamo le divayisi ejwayelekile yochungechunge bamaselula umenzi kulo nyaka. Ezithakazelisa kakhulu umbala kukho emzimbeni kusukela LG Leon H324 Titan. Izibuyekezo ke ahlukanisa njengoba yesiteleka kakhulu futhi engavamile.
idivayisi entry level ekuqaleni abakwazi ukuqhosha isixha esihle. Kuhlanganisa iqoqo sakugcina izingxenye esihlinzeka eliphansi idivayisi ukusebenza, futhi akuyona ncamashi eziseceleni. Futhi le gajethi izesekeli simiswe ngalendlela lelandzelako:
Empeleni idivayisi ibhethri ifakiwe.
Standard ishaja okukhipha nge "YUSB" Imbobo.
Universal esibonakalayo ikhebula ukushaja noma ukuvumelanisa i-PC.
Imihlahlandlela yokuphepha nokusebenza zedivayisi.
Kodwa njengoba sekushiwo ngaphambili, indikimba igajethi kungenzeka ezintathu imibala egolide, titanium emhlophe. Bonke bangabangasokile lula ukuqoqa udoti. Yebo futhi kulimaze kubo akunzima, ikakhulukazi ivelele kulokhu, LG Leon H324 Titan. Impendulo ngempela baqinisekisa. Ngakho-ke, ukuze sigweme izinkinga ezifana kubalulekile ngokushesha emva ukuthenga ukuthenga ifilimu zokuzivikela futhi bethela ngayo ikhava. Futhi umnikazi wedivayisi udinga ukuthenga i drive ezengeziwe zangaphandle. Awu stereo nalo hhayi endaweni. Ngaphandle kwayo, umsakazo ngeke zisebenze.
Iningi iphaneli phambi gajethi isibonisi nge diagonal 4.5 amayintshi. Ngenhla kuba yesifakwandlebeni, izakhi inzwa front ikhamera yevidiyo izingcingo. Ngezansi isibonisi isuselwe strip plastic nge logo yomenzi. Kodwa-control panel iyiswe ngezansi kwesikrini futhi siqukethe 4 izinkinobho: ngaphezu ejwayelekile ezintathu, kukhona i extra enikeza usuke okusheshayo phakathi asebenzayo-SIM khadi. Phezulu smartphone port alalelwayo, futhi ezansi - "MikroYuSB". Ikhava ezingemuva isuswe volume keys nesihluthu. Kukhona esesicabheni kwikhamera enkulu futhi izibani LED ukuze alale naye. Kodwa njengoba sekushiwo ngaphambili, kukhona ezintathu samuntu umbala idivayisi: ezimhlophe, titanium negolide. Amalungu ukwaba smartphone LG Leon H324 Titan. Izibuyekezo abonisa umbala walo ongajwayelekile. Nokho, inguqulo "Igolide" sinjengesicubu "apula" igajethi ngonyaka odlule ngombala.
processor Esinokwethenjelwa futhi eyongayo ukufakwa LG Leon. Izibuyekezo futhi ihlaba umkhosi ezingeni layo eliphansi umkhiqizo. Kunokunye ongakulindela kusukela CPU, okwethulwa eminyakeni emibili edlule, akudingekile. "Library" Konke lokhu inkampani MT6582. Kuhlanganisa 4 yezamakhompyutha module izakhiwo "A7". Lapho ukuxazulula imisebenzi enzima kakhulu imvamisa ngamunye zingandiswa ukuba 1.3 GHz. Lokhu kwanele imisebenzi kakhulu: ukufunda izincwadi, ukulalela umculo emsakazweni, video sokudlala, zula, nokunye. Ngisho imidlalo kakhulu ilila Ungasingatha ngaphandle kwezinkinga. Kodwa isizukulwane yakamuva 3D imidlalo nezinselele zokuba olunzima hardware ukugxusha smartphone kule divayisi akusho ugijime: Anginayo ngokwanele amandla ama-CPU.
Khombisa nevidiyo ikhadi
Yiqiniso, isikrini - lokhu ingenye izinzuzo main ezingaba ngiziqhayise kusukela mncintiswano smartphone LG Leon. Izibuyekezo ukwaba izinga zalo ezinhle. Isibonisi-matrix senziwa IPS True ubuchwepheshe. Ngakho, umbala imifanekiso, yokubuka engela kanye nokusebenza kwamandla luphakamisa akukho ukuphikisa. Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe kwesikrini - akukho igebe air phakathi touch kobuso faceplate futhi matrix esibukweni. Khombisa isinqumo kulokhu 854x480. I kwabantu yephikseli 220 ppi, ukuhlukanisa kwe-pixel ngabanye Ngakho kunzima ngempela. Okungukuthi, isibonisi uthola izinga ngokwanele. Ukuze idatha ingcaca, kule divayisi ifakwe ihluzo ikhadi "Mali 400MP2". Yiqiniso, ukusebenza eliphezulu ngeke ngiziqhayise, kodwa kwanele ukuba bethule CPU, okuyinto ngenxa lokhu kuye kwaba isofthiwe kanye ne-computing "is akazange athikanyezwe" ulwazi ingcaca.
Quality izithombe namavidyo ekamelweni main kungenziwa ngokuthi eyamukelekayo. It has a inzwa 5 megapixel. Kufanele autofocus futhi LED. Ngenxa yalokho, izithombe izinga wakhe omuhle. Kodwa yekhamera yangaphambili kule divayisi onesizotha ngempela. Yena inzwa megapixels 0.3 kuphela. Lokhu kwanele ukuze wenze amakholi wevidiyo. Kodwa kunokunye akulindelekile ezivela kuye.
Iningi imibuzo iyona inkumbulo subsystem LG Leon. Izibuyekezo abonisa ukushoda RAM. Kuyinto MB 768 nje. Nge MB mayelana 500 zazo kuhlala uhlelo izinqubo. Umsebenzisi ungaba futhi balindele MB 268 kuphela. Ngenxa yesizathu esisodwa noma ezimbili zokusebenza lokhu abathandekayo elula tando suffice. Hhayi-ke, uma uzama ukusebenzisa izinhlelo okwengeziwe, ifoni kuyoba kakhulu "bese wehlisa ijubane." Ezithile izinqumo RAM ukushoda ukufaka uhlelo esikhethekile yokuhlanza yalo evamile. Kodwa kwakusazoba kangcono uma igajethi wayekhona-1 GB. Likhono isitoreji esakhelwe 4 GB. Cishe ingxenye yabo kubo zizogcwaliswa isofthiwe yohlelo. Inani elisele akwanele umsebenzi ukhululekile. Ngakho-ke, ngaphandle zangaphandle flash drive umnikazi i "smart 'smart Ifoni ayikwazi ukwenza. umthamo wayo kuleli cala lingafika ku-32 GB.
Umthamo we ibhethri ephelele kule gajethi 1900 mah ibhetri. Uma kucatshangelwa kudivayisi kokubuka diagonal 4.5 amayintshi, eyonga ugesi ngokwanele futhi ayikwazi ukusebenza wokugaya izicelo olunzulu amandla ukuncipha ibhethri izothatha izinsuku 2 wokusebenza nezinga isilinganiso umthwalo phezu kulandzelana nekuhlunga tinsita. A more ezingeni kakhulu ukusetshenziswa "smart" Ifoni value unikezwa usuku, ngokwanele kakade. Uma unciphisa umthwalo igajethi, ungathola izinsuku ezintathu wempilo yebhethri. Lena nesizotha kakhulu amazinga namuhla. isixazululo Specific le nkinga ingase yangaphandle ibhethri owengeziwe, kodwa kuyodingeka ukuthenga eceleni for imali eyengeziwe. Lena ethile ebalulekile, kodwa kulokhu, le gajethi ngeke zingafezeki nganoma iyiphi izimo.
Uhlu ejwayelekile ye-interface ifakwe ifoni LG Leon. Izibuyekezo ukwaba ezinjalo kubo:
"Wi-Fi" - indlela eyinhloko ukuze uthumele futhi wamukele ukwaziswa okukuyi-Internet.
"I-Bluetooth" - iyindlela enhle yokuxhumana ngama-earphone engenantambo nokwabelana ngedatha nabanye Smartphones.
GPS ikuvumela ukuvula "smart" ifoni itilosi ngaphandle kwezinkinga.
Ukwesekwa Full for wonke amanethiwekhi akhona njengamanje mobile, kuhlanganise 4G.
interface Wired kukhona izimbobo "MikroYuSB" futhi "3.5 mm Audiodzhek".
Enye inguqulo yamuva kakhulu ngaphansi inombolo 5.0 "Android" yesistimu yokusebenza ifakiwe ku-smartphone LG Leon H324. Izibuyekezo ukwaba lokhu izinto zimhambele kahle. Kodwa ngesikhathi esifanayo kukhona ngempela inkinga enkulu: ephelelwe yisikhathi hardware ukugxusha kanye fresh isofthiwe uhlelo ayihambelani. Amandla aphelele we-inguqulo yakamuva ye "Android" kule chip-32-bit akunakwenzeka ubembule. Futhi inani RAM endaweni 768 MB kuholela yokuthi ngisho ezifana izicelo ezilula njengoba "Ifonibhuku" futhi "SMS" "kubambezela" kule divayisi. Yiqiniso, i-nokwenza ezithile ikhodi kudivayisi senziwa, kodwa akwanele ukuxazulula inkinga yokuntuleka hardware imithombo. "MT6582" mkhulu version 4.4, kodwa 5.0 akuseyona ngokwanele. Futhi lena miscalculation onjiniyela-Korean.
Kwabaningi manje kungenzeka ukuthenga?
Kuze kube manje, kulinganiselwa $ 110 smartphone LG Leon H324. Izibuyekezo abonisa ukuthi izindleko idivayisi kakhulu overstated. Idivayisi nge efanayo noma kangcono ngisho hardware imingcele, kodwa brand ngaphansi owaziwa, balinganiselwa ku $ 80. Ngokwesibonelo, Dodgee X5 inama cishe nemingcele efanayo (umehluko inani RAM - 1 GB vs. 768 MB futhi kukhona isendlalelo emoyeni phakathi inzwa kwesikrini), kodwa kubiza 30 zamaRandi eshibhile. Umehluko for smartphone ephansi ekupheleni kubalulekile, ukukhokhela i extra $ 30 umkhiqizo umthengi bezikhali kule divayisi ngokuqinisekile ngeke.
Lokhu smartphone uqhosha eziningi eziwusizo: eliphezulu esibukweni, okungenaphutha inhlangano umzimba ngokwanele elikhiqizayo platform Computing. Kodwa kulinganiswe ethile eyodwa ebalulekile - zibiza. Intengo yale divayisi okusobala overestimated. Kuleli banga intengo izindleko kube into eza kuqala esiphansi kanye izici ezifanayo. Isigaba kuphela, okuzoba ezithakazelisayo yale gajethi - abalandeli imikhiqizo ukuthi umenzi South Korean ezikhiqiza umbala kukho LG Leon Gold. Izibuyekezo abonisa ngezinga elithile ukufana ne-iPhone ngonyaka odlule 6.
Uma azizange ulele intengo ke nakanjani kuyoba ethengwa kakhulu LG Leon. Izibuyekezo kule ngokucacile nangokunembile ibonisa. Kodwa nakhu extra $ 30 izindleko idivayisi iba isithiyo sina endleleni. It kuvela ukuthi ngokuya yokuthengisa ilahlekelwa izimbangi zayo ngqo okufanayo LG Leon H324 Gold. Izibuyekezo ukwaba umbala walo ongajwayelekile namadivayisi izinga okusezingeni bebonke, kodwa abangenangqondo inqubomgomo zamanani umenzi kuvimbela yokwanda esebenzayo ye le gajethi.
Penza black uhlu abaqashi. Enterprises Penza. Ukubuyekeza ku abaqashi Penza